दराजको महाबचत बजार अभियान - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
दराजको महाबचत बजार अभियान
प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७८, शनिबार २०:३१
नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार,दराजले श्रावन ३ देखि दराज महाबचत बजार सुरु गरेको छ। यस अभियानको मुख्य उदेश्य ग्राहकहरुका लागि बचत प्रबर्धन गर्नु हो । यस अभियानमा रु. ४,००० सम्मको छुट, बैंक कार्ड वा आईएमई पे (IME Pay) मार्फत अनलाइन प्री-पेमेन्टमा रु २,००० सम्मको छुट, रु. १ मा आई फोन १२ जित्ने मौका, बम्पर उपहारमा म्याक बुक प्रो १३ जित्ने मौका , नि शुल्क डेलिभारी , नि शुल्क भाउचर साथै थुप्रै अरु पुरस्कार जित्ने मौका रहेको छ।
यस अभियानको लागि, नाबिल बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छे बैंक र एनएमबी बैंकका कार्डधारकहरूले प्री-पेमेन्टमा आकर्षक छुटको मजा लिन सक्नेछन्। यी बैंकका डेबिट कार्ड धारकहरूले १५ % (रु. १,५०० सम्म)को छुट पाउनेछन् भने क्रेडिट कार्ड धारकहरूले कार्ड प्री-पेमेन्टमा २०% (रु २००० सम्म) छुट पाउनेछन। यो अफर सिमित समयको लागि मात्र उपलब्द रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
यसै गरि, ग्राहकहरु आफ्नो आईएमई पे (IME Pay) खाता मार्फत प्री-पेमेन्ट गरेर मूल्य अजै कम गर्न पनि सक्दछन् । आईएमई पे (IME Pay) मार्फत भुक्तानी गरे ग्राहकहरूले आफ्नो सबै खरीदहरूमा २०% (रु. १,००० सम्म) छुट पाउन सक्नेछन् । यसबाहेक, पहिलो पटक भिसा कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्ने दराज ग्राहकहरूले २०% सम्मको छुट पाउन सक्नेछन् । भिसा डेबिट कार्ड मार्फत प्री-पेमेन्टी गरेमा १५ % (रु. ५००) सम्म छुट र भिसा क्रेडिट कार्ड मार्फत पूर्व-भुक्तानीमा २०% (रु. ५००) छुट पाउन सक्नेछन।
दराज महाबचत बजारमा प्रदर्सित “खेल एक रुपैयाँ”मा भाग लिये ग्राहकहरुले रु. १,३३,००० मूल्यको आई फोन १२ र रु. ५०,००० को श्री बालाजी हिराको झुम्का जस्ता पुरस्कार केवल १ रुपैयाँमा जित्न सक्नेछन्। यसै गरि अरु अन्य पुरस्कार पनि उपलब्द छन् । खेलमा भाग लिन ग्राहकहरुले बैंक कार्ड वा आफ्नो आईएमई पे (IME Pay) खाता प्रयोग गरि १ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्दछन् । येदि जितेनन भनि रकम फिर्ता हुनेछ।
“७०,००० भन्दा बढी अर्डरको साथ दराज महा बचत बजारले गत वर्ष धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । यस वर्ष, ग्राहकहरूले अनलाइन पूर्व-भुक्तान र आईएमई पे (IME Pay) मार्फत अझ बढी बचत गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले ६ लाख भन्दा बढी उत्पादनहरू मद्दे छनौट गर्न सक्दछन् भने हाम्रो १०,००० भन्दा बढी विक्रेता रदराज आफैं पनि पूर्ण ग्राहक सन्तुष्टिको डेलिभर गर्न तयार छन् । यसै गरि हामी छूट, एफबी लाइभ भिडियो, प्रतियोगिता र प्रस्तावहरूको साथ एक रमाईलो अभियानको लागि आशा गरिरहेका छौं”- दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक लिनो अलरिङ्गले भने ।
थप विवरणका लागि : https://click.daraz.com.np/e/_7BiQv
संघीय संसदका माननीयहरुको बैंक खाता सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरिएको छ
असइकी श्रीमती अर्कैसँग, छोरी पनि ताक्दा फन्दामा
श्रीमान् सशस्त्र प्रहरीको असइ, घरमा दुर्ई छोरी तर धेरै समय
प्रहरीले ३३ किलो सुनकाण्डका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ ।
जहाँ बालुवामा पोलेको आलु प्रख्यात छ..
भारतको उत्तर प्रदेशमा बालुवामा पोलिएको आलु निकै प्रख्यात हुँदै गएको